Ukuphathwa Kwempilo Yesivumelwano seConga: Thuthukisa Ukusebenza Kahle Kwezentengiselwano ngeDokhumenti Workflow Automation | Martech Zone
Ukwenza ibhizinisi elizizwa lingenakho ukungqubuzana nekhasimende lapho imakethe ikhula ngobunzima akuyona into elula leyo. Ubuchwepheshe beConga nesixazululo esibanzi sokwenza imisebenzi yezohwebo - izinqubo ezungeze Lungiselela i-Quote Price (CPQ), Ukuphathwa Kwempilo Yamakhasimende (CLM), kanye Imibhalo Yedijithali - isiza amabhizinisi ukubhekana nobunzima ngokuzethemba ukuze akwazi ukuhlinzeka isipiliyoni samakhasimende esinokungqubuzana nokusheshisa imali.
Nge-Conga, amabhizinisi ahamba ngokushesha ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende namuhla ngenkathi ekhulisa amandla okulungiselela ikusasa elingaqinisekile. IConga's Digital Document Transformation Suite yakhelwe ukusebenza nomxube wobuchwepheshe benkampani yakho nokuhlanganisa ngqo neCRM yakho.
Kuyini Ukuphathwa Kwempilo Yesivumelwano?
Inkontileka ye-Lifecycle Management ukuphathwa kokusebenza okusebenzayo, okuyisisekelo kwenkontileka kusukela ekuqalisweni ngomklomelo, ukuhambisana, nokuvuselelwa. Ukuqaliswa kwe-CLM kungaholela ekuthuthukeni okukhulu ekulondolozeni izindleko nokusebenza kahle.
Ukuphathwa Kwempilo Yesivumelwano seConga
IConga CLM ukuphela-kuya-ekupheleni ukuphathwa kwenkontileka yokuphila (CLM) isixazululo esiqeda inkathi yezinqubo zenkontileka ezenziwa ngesandla nezingavunyelwe futhi sinikeze okuhlangenwe nakho kwekhwalithi ephezulu kubo bobabili abathengi bangaphakathi nabangaphandle. IConga CLM idonsela phambili ngokugqama kwenkontileka, inciphisa izikhathi zomjikelezo, ithuthukisa imiphumela yezingxoxo, futhi inciphisa ubungozi. Eyakhelwe emafini, iConga ixhuma kalula nezixazululo zeCRM ukwenza lula imisebenzi yezentengiso. IConga inika amandla yonke iminyango ohambweni lwayo lokufeza ubuhle bezohwebo.
Isixazululo esibanzi seConga sinika amandla imali, ukusebenza, kanye namaqembu ezomthetho ukusingatha ubunzima bebhizinisi kalula. Sikhona ukusiza ukusheshisa ibhizinisi, ukwenza lula ukusebenza, nokuguqula okuhlangenwe nakho kwamakhasimende. Ngezixazululo zanoma yiluphi usayizi webhizinisi, sizibophezele ekuhlangabezaneni namabhizinisi ngqo lapho ezokwenza khona umbono ocacile wokuthi bazoya kuphi ngokulandelayo.
UFrank Holland, isikhulu esiphezulu seConga
IConga CLM iyithuluzi lokuphathwa kwenkontileka lokuqala lokusebenzela wonke amazinga wejika lokuvuthwa kusuka kumfundamakhwela kuya kuchwepheshe wazo zonke izinkontileka. Imakethe yezomthetho ayikaze inikelwe okukodwa kusuka emaphethelweni aphansi kuya ekugcineni okuphezulu kwejika lokuvuthwa. Ngenxa yalokhu, i-Conga CLM ayisiyinhle kuphela ezinkampanini ezikhula ngokushesha, kepha amakhono esigaba sebhizinisi manje aseyatholakala kumabhizinisi ama-SMB / aphakathi nendawo ngenani elincane lezindleko.
Abasebenzisi beSalesforce bangaphatha izinkontileka ngqo kuhlelo lokusebenza ngenkathi basebenzisa ukuphathwa kwesivumelwano sokuphila (i-CLM) kusuka ekudalweni kuya kusiginesha. Hhayi lokho kuphela, kepha iqembu lakho lokuthengisa lingagcina futhi liphathe izinkontileka ezingenamkhawulo, likhiqize imibiko, lilandele ukuxhumana, nokunye okuningi.
I-Conga Document Workflow Automation
IConga Imibhalo yenza lula futhi ikhulise imibhalo ebucayi yansuku zonke ngenkathi ikhulula abasebenzi ukuthi benze okuningi kakhulu. Izinhlangano zingadala kalula nangokuphumelelayo ngokwengeziwe, ukuphatha, ukusebenzisana, nokusayina yonke imibhalo ebalulekile ebhizinisini.
Ukuzenzakalela kukhipha umsebenzi enqubweni futhi kususe izinyathelo zomsebenzisi ezingaholela emaphutheni, konge isikhathi esibalulekile, futhi kukhulise ukusebenza kahle nokukhiqiza. Amandla okuphepha, ahlanganisiwe eSignature enza kube lula kunakuqala ukuphothula amadokhumende agxeka kakhulu ibhizinisi, abopha ngokusemthethweni kunoma iyiphi indawo. Ngezixazululo zeConga Documents, imijikelezo yebhizinisi iqinisekisiwe ukuthi izoshesha.
Kuyini ukumisa, Intengo, i-Quote (CPQ)?
Lungiselela, isoftware yenani lentengo igama elisetshenziswa embonini yebhizinisi-kuya-ebhizinisini (B2B) ukuchaza amasistimu esoftware asiza abathengisi ukuthi bacaphune imikhiqizo eyinkimbinkimbi futhi engalungiswa.
Ukulungiswa kweConga, Intengo, Isixazululo se-Quote
IConga CPQ iyi- lungiselela inani lesilinganiso Isixazululo se- (CPQ) esiqondisa amaqembu okuthengisa ukwakha nokwandisa okunikezwayo ngokunika amandla abathengisi ukukhetha ukuxuba okuhle kakhulu kwemikhiqizo nezinsizakalo (okubhaliselwe, izinsizakalo ze-aftermarket, nezinsizakalo zobungcweti) kusuka kukhathalogi yendawo yonke. IConga CPQ ibese ilungisa izixazululo, isebenzise amamodeli entengo, futhi ikhiqize isilinganiso esihle sokuwina amadili. IConga CPQ isiza ulwazi lokuthengisa kusuka ekuqwashisweni komthengi nenhloso yokuthenga ngesenzo sokuthenga, isiza izinhlangano ukuthi zifeze ubuhle bezohwebo ngokunika amandla amaqembu okuthengisa ukuthi athengise kahle kakhulu ngesikhathi esincane.
Ubuchwepheshe beConga buvumela amabhizinisi abo bonke osayizi, kuzo zonke izimboni emhlabeni jikelele, ukuthi bakwazi ukufaka amadijithali amadokhumende nezivumelwano ezenza ibhizinisi labo liqhubeke. Imiphumela iletha ukonga izindleko, amamaki enzuzo ephezulu, ukufinyelela ngokushesha emikhiqizweni nasezinsizakalweni, kanye nokusheshisa isivinini sebhizinisi.
Thola iDemo yaseCongo
Tags: b2bcongaconga clmconga cpqinkontileka ezishintshayoukuphathwa kwenkontilekacpqCRMukuphathwa kwamakhasimende empiloukuphathwa kwedokhumentiesignisignaturesalesforceukusebenza kwe-automation